“Aamus Oo Noqo Diyaar ” Thomas Tuchel Oo Digniin Adag Udiray Timo Werner Iyo Xidigaha Chelsea. - Goolhaye
Tababaraha kooxda chelsea ee Thomas Tuchel ayaa diiday in uu amaan balaaran ujeediyo weeraryahanka kooxdiisa ee Timo Werner kadib guushii ay Chelsea ka gaartay kooxda Leicester City isaga oo u sheegay weeraryahanka iyo dhamaan xidigaha kooxdiisa in ay diirada saaraan kulanka ay la leeyihiin kooxda Aston Villa.
Kooxda Chelsea ayaa ka aarsatay dhigeeda Leicester City guuldaradii final-ka FA Cup-ka ee sabtidii iyagoo ku garaacay garoon-ka Stamford Bridge taasi oo chelsea usuura gelisey iney soo galaan kaalinta seddexaad ee kala sareynta horyaalka Premier League-ga ingiriiska.
Chelsea ayaa ku hormartay goolasha iyadoo goolka 1aad ka heshay Antonio Rudiger waxana hogaanka udheereyay Jorginho oo dhaliyey rigoore lagu galay Timo Werner, iayadoo goolka madiga ah Leicester City udhaliyey Kelechi Iheanacho.
Tuchel ayaa sidoo kale diiday inuu amaano Antonio Rudiger oo dhaliyey gool kulankii Ay guusha ka gaareen Leicester City sidoo kalena soo bandhigay qaab ciyaareed wanagsan isaga oo sheegay in loo baahan yahay in dhamaan xidigaha chelsea iska hilmaaman guushii Leicester City diiradana saaran kulanka ugu dambeeya ee Aston villa.
Thomas Tuchel ayaa doonaya in xidigaha kooxdiisa udiyaar garooban kulanka ugu dambeeya horyaalka ingiriiska ee ay booqanayaan kooxda Aston Villa maalinta axada si ay u xaqiijistaan kasoo qeyb galkooda Champions League-ga xili ciyaareedka dambe.